China Thermocouple Kubika Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Kubika kweThermocouple
Kubika kweThermocouple Vagadziri
Kambani yedu yakashongedzerwa nemazana ezvigadzirwa zvepamberi zvekugadzira uye akati wandei emazuva ano emhando yepamusoro-tekinoroji mitsara yekugadzira. Isu tine anindependent tekinoroji yekutsvagisa nekusimudzira nzvimbo, Thermocouple Kubika yekuongorora nzvimbo uye marabhoritari. Kambani yedu ine simbi stamping, kuumba, kupfapfaidza uye zvemagetsi mashopu uye inonyatso kudzora mhando yechigadzirwa.
Tichiomerera kune Thermocouple Kubika bhizinesi musimboti wekubatsirana mabhenefiti, isu takavaka zita rakanaka pakati pevatengi vedu nekuda kwedu kwakakwana masevhisi, mhando zvigadzirwa uye zvemakwikwi mitengo.
Iyo huru murazvo kubva kune mbiri mhete yakakwira simba shanu spouts air jekiseni system inoshandura kubva kune yekunze mhete kuenda pakati, inosimudzira murazvo mukuru kuti utarise zvakanyanya pazvinzvimbo zvakakosha zveThermocouple Kubika nekuvandudza kugona kwekupisa uye kuve nechokwadi chekupisa kwakaringana. simba uye kuchengetedza simba rakawanda.
1) Pulse ignition, 100% kupisa uye kukurumidza kupisa.
2) kubudirira kupisa mumamiriro ekumanikidzwa kusagadzikana.
3) Pulse igniter ine yepamusoro-mhando Thermocouple Kubika uye mutengo wemakwikwi.
4) Igniter yapfuura iyo CSA uye CE.
1) Zvigadzirwa zvedu gasi mvura hita zvakawana CE mvumo
2)Chese chigadzirwa gasi mvura hita inoyedzwa mumutsara wefekitori isati yarongedzerwa
3) Muenzaniso weThermocouple Kubika unogona kupihwa iwe kuti uongorore
4) Katoni kurongedza, yakavakirwa-mukati batten, simbisa zvigadzirwa mukufambisa kwakanaka kuenda kuchiteshi chako
Thermocouple Kubika vane chitupa cheEC, SASO, COC, CCC, CB, inogona kuita sarudzo.
1.Yese yeHaodi gasi hobs yakarongedzwa nemashanu matanda ekisipoti akaenzana makatoni.
2.The burner caps zvese zvakagadziriswa nema stickers.
3.Vatsigiri vePan vese vakagadziriswa mufuro, furo rinogona kumira munhu.
4.Sample yegasi chitofu inogona kugadzirirwa mu1 vhiki
5.20'GP / 40'HQ zvinhu zvinogona kugadzirira mu25days
1. Chii chako chikuru chigadzirwa mutsetse chakagadzirwa?
1. Ndeipi yako huru Thermocouple Kubika tambo inogadzirwa?
Isu tinonyanya kugadzira Yakavakirwa-mukati Chitofu (isina girazi & girazi), Yakavakirwa-muCeramic Stove, Yakavakirwa-muInuction Chitofu, Range Hood, gasi hita, gasi mvura hita, yemagetsi hita yemvura
2.Yako fekitori kana kambani yekutengesa?
Isu tiri fekitori, tinopa OEM & ODM masevhisi.
3.Chii chako chikuru musika?
Musika wedu mukuru ndewe Middle East, South America, Europe, Russia, Africa uye Mamwe ematunhu.
4.Iwe une kugona kuita yakazvimirira tsvakiridzo nekusimudzira?
Dhipatimendi redu reinjiniya rine vanhu gumi, isu tine yekutsvagisa nekusimudzira kugona. Isu tinounganidza nguva nenguva mhinduro yega yega yevatengi, kugadzirisa chigadzirwa uye nekuvandudza chigadzirwa. Isu tinobatawo nyowani nyowani Thermocouple Kubika kuburitsa.
5.Kana ndine mubvunzo ndinoda mazano kuti ndingakubata sei?
Iwe unogona SNS chikuva kana zvakananga kuburikidza nehukuru kubvunza uye kutumira e-mail kuti utibvunze isu.
6. Chii chauchapa Thermocouple Kubika masevhisi?
Kana iwe usina hanya, iwe unogona kutiudza irinotevera ruzivo, iwe uri mafekitori, zvitoro, kutenga, vatengesi, vatengi kana kuita mainjiniya, dhizaini, kana imba. Tinogona kupa tsananguro yakadzama kwauri. Iwe zvakare uchapindura nemwoyo murefu mibvunzo yese. Isu tasimbisa chikamu chekunyunyuta kwevatengi, kana iwe usina kugutsikana nebasa redu, unogona kutitaurira zvakananga kuburikidza neemail kana nhare. Isu tinopindura ese Thermocouple Kubika iwe. Ndatenda
Brass Wire Thermocouple Flame Sensor yeGasi Ovheni
Iyo iri pasi yakamanikidza vharuvhu yakayerwa kutenderedza 50000BTU inoda kushanda ne thermocouple, ndapota simbisa system yako usati waronga kuti udzore kudzoka.Iwe unogona kuva nechokwadi chekutenga yendarira waya thermocouple murazvo sensor kune gasi hovhoni kubva kufekitori yedu uye isu tinokupa iwe yakanakisa pashure-sale basa uye nenguva kukurukura.
Safety Household Thermocouple yeMagnet Valve
Iyo yakaderera vharuvhu vharuvhu yakarongedzwa kutenderedza 50000BTU inoda kushanda ne thermocouple, ndapota simbisa system yako usati waronga kuti udzore kudzoka.Tinogamuchirwa kutenga yakachengeteka imba thermocouple yemagineti vharafu kubva kwatiri. Chikumbiro chega chega kubva kune vatengi chiri kupindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana.
Aokai inyanzvi Kubika kweThermocouple vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.